Qeybaha cilmi baarista2022-04-15T11:30:48-04:00
Shaqada Bulshada Tayada leh
Cadaalad darada la balaadhiyey iyo iscaawinta COVID-19 ee faafida
Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu sii kordhiyay cadaalad darada ka jirta Mareykanka, taas oo tusaale loogu soo qaatay Ypsilanti, Michigan. Si kastaba ha noqotee, aafada ayaa sidoo kale siineysa fursad dib loogu fikiro siyaabaha jira ee adduunka, iyo shabakadaha gargaarka ee isu fidiya baahiyaha aasaasiga ah ee dadka inta lagu jiro dhibaatooyin badan iyadoo sidoo kale ka shaqeyneysa isbeddel xag-jir ah oo sii kordhaya waxay fursad siineysaa shaqaalaha bulshada inay baaraan xiriirka “caawinta” Qoraagu wuxuu adeegsadaa khibraddiisa shaqsiyeed ee shabakadda gargaarka wadajirka ah ee deegaanka si uu u baaro awoodda iyo suurtagalnimada gargaarka is-dhaafsiga ah, gaar ahaan xilliyada dhibaatooyinka, iyo sidoo kale ilaha iska caabbinta shaqada bulshada ee noocyada baahinta iyo kuwa aan xirfadda ahayn ee caawinta iyo daryeelka.
Ka Gudub Nuglaanta Bulshada: COVID-19 oo ah Musiibo Raasamaal ah
Khataraha iyo goobta masiibooyinka waxay si joogta ah u xoojiyaan inaysan jirin wax la yiraahdo masiibo dabiici ah. Tani waxay ka dhigan tahay xaqiiqda ah in masiibooyinka deegaanka ay sababaan ficillada aadanaha ama ficilla'aanta isku dhafka ah ee dhacdooyinka khatarta dabiiciga ah, sida duufaan, dab, dhulgariir. Qormadani waxa ay ku doodaysaa in suugaanta musiibada ay naga caawin karto fahamka sababaha iyo cawaaqibka masiibada COVID-19 laakiin waa haddii aan u tixgelinno masiibada inay tahay musiibo iyo saameynteeda qoto dheer sida natiijooyinka raasamaalnimada jinsiyadeed.
Isbeddelka Cimilada, Masiibooyinka Dabiiciga ah, iyo Saamaynta Yaraynta Masiibada ee Bulshooyinka LGBTQ+, Black, iyo POC
Cilmi-baaris ayaa la sameeyay si loo ururiyo loona qiimeeyo waaya-aragnimada bulshooyinka la haybsooco ee ay saameeyeen dhacdooyinka cimilada ama masiibooyinka dabiiciga ah. Natiijooyinka ka soo baxa daraasaddan waxay gacan ka geysan karaan wargelinta, cusboonaysiinta, ama abuurista siyaasadaha cusub ee DRR ee loo dhan yahay kuwaas oo aqoonsanaya khibradaha iyo baahiyaha bulshooyinka laga tirada badan yahay, oo horumariya natiijooyinka shakhsiyaadkan.
Dib u Eegista Siyaasadda Dadweynaha ee LSE
Jawaabaha Bulshada ee Faafida Coronavirus: Sidee Gargaarka Mutual u caawin karaa
Bilowga cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu sababay argagax ku saabsan shaqa luminta, cuntada iyo musqulaha oo yaraada, iyo go'doominta bulshada, oo ka badan iyo ka sareysa saameynta caafimaad ee fayraska. Dadku waxay doonayeen inay ku caawiyaan miisaan ballaaran waxaana jiray jawaab celin ballaaran oo bulshada ah. Faafida waxay tamar ku soo kordhisay xaafadaha iyo bulshada, taasoo horseeday in si deg deg ah ay u sameysmaan kooxo is caawiya oo qaabab badan oo kala duwan ku baahsan dalka oo dhan.
Robert Soden iyo Embry Wood Owen
Dilemmas in Aid Mutual: Casharrada Xog-ogaaleyaasha Qalalaasaha ee Jawaabta Degdegga ah ee Bulshada ee Cudurka Faafa
Iyada oo laga jawaabayo masiibada COVID-19, shabakadaha qabanqaabiyeyaasha bulshada iyo hawl-wadeennada ayaa isu abaabulay si ay u taageeraan deriskooda iyada oo qayb ka ah kooxaha gargaarka wadaagga ah ee Maraykanka oo dhan. Jawaabta degdega ah ee bulshada waa dhacdo caadi ah inta lagu jiro qalalaasaha, laakiin kaalmaynta wadajirka ah ee masiibada ayaa yeelatay dabeecad gooni ah, iyada oo laga soo qaatay caadooyinka abaabulka siyaasadeed iyo bulshada. Cilmi-baadhisyadayada lagu sameeyo hawlahan waxay soo jeedinaysaa in isu-dubbaridka gargaarka la wadaago ee la xidhiidha musiibada uu yahay dhaqan sii kordhaya laakiin uu weli yahay mid kobcaya oo lagu muransan yahay.
Anarchism -ka Musiibada: Hurricane Katrina iyo Naxdinta Aqoonsiga
Mawduuca udub dhexaadka u ah milicsiga ayaa ah inkasta oo masiibada Katrina ay bixinayso caddaymo badan oo ku saabsan sida dhibaatadu u abuurto fursado ku habboon xoojinta dhiig -miirashada, haddana wixii markaas ka dambeeyay waxaa loogu yeeraa “hanti -goosadka musiibada” kaas oo loogu yeeri karo “fashiistadii musiibada,” waxay sidoo kale abuureysaa shuruudo si aan caadi ahayn u kobcaya is -kaashiga, wadajirka iyo iskaashiga wadaagga, wax aan ugu yeeri karno “anarchism musiibo.”
Xididdada Isku Xidhan iyo Fursadaha Kale: Antropology ee Musiibooyinka COVID-19 Agenda Research
Waxaan u horumarinnaa su'aalaha ajandaha cilmi baarista ee COVID-19 oo ka socda cilmu-nafsiga musiibooyinka si loo barto soo-saarka cudurrada faafa
iyada oo ah muuqaal ka mid ah arrimaha bulshada ee caadiga ah ee la aqbalay. Waxaan ku dhiirigalinaynaa daraasad la dabaqay oo ku saabsan faafida taas oo u aqoonsan inay tahay wax soo saarka isku xirka dadka, nidaamyadooda bulsheed, kuwa aan bini'aadanimada ahayn, iyo dunida maadiga ah si aad u ballaaran, iyadoo fiiro gaar ah loo leeyahay sababaha asalka ah, (boostada) gumeysiga iyo hanti-goosadnimada, shabakadaha kala duwan, siyaasada aqoonta, hadiyadaha iyo iscaawinta, iyo shaqada soo kabashada.
Naqshadeynta iyo Dhaqanka
Kropotkin-19: Jawaab Gargaar Is-kaashan ah oo loogu talagalay COVID-19 ee Athens
Dhibaatada caafimaad ee hadda jirta, oo ay sababtay faafitaanka COVID-19, ayaa abaabushay kooxo u ololeeya iyo shakhsiyaad ka dhex jira dhaqdhaqaaqa bulshada adduunka oo dhan si ay uga jawaabaan ficillada midnimada iyo is-caawinta. Griiga, inta lagu gudajiro xirida inta udhaxeysa Maarso iyo Meey 2020, dhowr abaabul oo wadajirka ah oo isxilqaamay ayaa kadhacay Athens si loogu taageero kuwa ubaahan.
'Bulshadu ha qabsadaan shaqadooda': doorka gargaarka wadaagga ah iyo kooxaha is-caawinta ee wax ka qabashada masiibada ee Covid-19
Sida ugu dhaqsaha badan, wax ku ool ah, oo xasaasi ah looga jawaabo dhibaatooyinka baaxadda leh ayaa si qoto dheer looga dooday qaybta gargaarka. Diirada hay'aduhu mashaariicda iyo natiijooyinka ayaa horseeday suugaan badan oo ku saabsan waxtarka faragelinta dibadda, halka ficillada shakhsiyaadka iyo bulshooyinka si ay u daboolaan baahiyahooda ay weli ku jiraan cilmi-baaris. Warqadani waxay doonaysaa in la xidho farqiga iyadoo lagu biirayo isbeddellada caalamiga ah iyo daraasado gaar ah si loo sahamiyo miisaanka, ballaca, iyo sifooyinka jawaabaha muwaaddiniinta iyo bulshadu ay hoggaaminayso ee ku aaddan masiibada Covid-19 ee 2020-21.
Gargaarka Wadajirka ah ee Ka-hortagga Praxis
Xabsiyada, jeelasha, iyo xarumaha lagu haayo, qeexitaan ahaan, waxaa loogu talagalay in lagu karantiilo oo lagu kala saaro dadka iyo bulshadooda. Si loola dagaallamo loona kiciyo carceraliintu uma baahna kaliya burburinta, laakiin dib-u-eegis xag-jir ah, dhisme - bulshooyin barwaaqo, xor iyo daryeel leh. Jawaabaha iyo ilaha si wada jir ah loo soo saaray ee loogu talagalay dadka iyo nidaamka deegaanka, oo ay hogaaminayaan kuwa leh khibrad nololeed oo dulmiga ah, ayaa aasaas u ah adduun aan lahayn xabsiyo.
Barashada Dhaqdhaqaaqa Bulshada
Gargaarka isdhaafsiga ah ee waqooyiga London inta lagu guda jiro masiibada Covid-19
Intii u dhaxaysay Maarso iyo Juun 2020, dadka deggan waqooyiga London waxay wajaheen
Faafida Covid-19 iyadoo la abuurayo kooxaha Gargaarka Mutual Aid
WhatsApp iyo Facebook. Kooxahan kaliya kama hadlin
baahiyaha aasaasiga ah ee badbaadada sida keenista raashinka iyo dawooyinka
dadka cudurka qaba, dadka da'da ah, iyo dadka kale ee nugul
karantiil; sidoo kale waxay bixiyeen fursado isdhexgalka bulshada
u dhexeeya shisheeyaha isku xaafad ku nool inta lagu jiro xidhitaanka. Guushooda waxa ay ku xidhnayd abaabulkooda degdega ah, la qabsiga iyo aqoonta deegaanka.
Cadaalad Ma Jirto, Ma Jirto Adkeysiga: Ciribtirka Xabsiga Sida Masiibada Masiibada ee Xiliga Isbedelka Cimilada
Aafooyinku waa kuwo soo noqnoqda oo burburaya halka cawaaqib xumada dadka xidhani ay sii kordhayso oo muuqata. Isla mar ahaantaana, aqoonyahannada, shakhsiyaadka, iyo bulshooyinka waxay la halgamayaan arxan-darrada bilayska iyo cunsuriyadda ka dhanka ah dadka madow ee nidaamka sharciga dembiyada iyagoo ku hawlan fikradda baabi'inta. Maqaalkan waxaan ku muujineynaa in arimahaan aysan kala go'in waxaana ku doodeynaa in baabi'inta dhismaha warshadaha xabsiga (PIC) ay yareyn doonto saameynta masiibooyinka ay u geystaan ​​dadka xiran iyo bulshadooda.
Shabakadda hawl-wadeennada, cilmi-baarayaasha iyo hawl-wadeennada ka soo horjeeda dembi-gelinta wadajirka & kaabayaasha daryeelka guud.
Saxaafadda Columbia University Press
Kooxaha Caawinta Degdega ah ee Jawaabta Degdegga ah: Jawaab cusub oo ku saabsan Dhibaatooyinka Bulshada iyo Masiibooyinka Dabiiciga ah
Daryeelayaal xirfadlayaal ah maka jawaabi karaan baahiyaha shakhsiyaadka iyo qoysaska wajaha khibradaha nolosha u halista ah, ama "dhibaatooyinka," sida saameynta qashinka kiimikada ee Kanaalka Jacaylka, qaraxii nukliyeerka ee ka dhacay Jasiiradda Three Mile, afduubayaashii Iran lagu qabtay, volcanic burburka Mount Saint Helens, ama shilka diyaarad DC-lO ee Chicago?
TOPIA: Joornaalka Kanada ee Daraasaadka Dhaqanka
Wadajirka Waqtiga Khatarta: Nuglaanta iyo U Soo Jeeda Gargaarka Labada Dhinac
Bilihii hore ee faafitaanka COVID-19, fikradda kaalmaynta labada dhinac si degdeg ah ayaa loo qaatay sidii tusaalaha ugu habboon ee wadajirka. Warqadani waxay eegaysaa sababta kaalmaynta labada dhinac ay u heleen caannimadan wakhtigan iyadoo la eegayo saamaynta saamaynta leh ee khatarta, nuglaanshaha iyo lama huraanka u ah daryeelka. Halkii aan u dabaaldegi lahayn u soo jeesashada gargaarka labada dhinac oo ah dariiqa ugu wanaagsan ee caddaaladda, si kastaba ha ahaatee, warqaddu waxay soo jeedinaysaa inaan si xeeladaysan uga fikirno qaababka aan u isticmaalno badbaadada, annagoo tixgelinayna gargaarka wadajirka ah mid ka mid ah istaraatiijiyad ka mid ah kuwa badan si loo soo saaro jawaabahayaga waxyeellada ka hor. , waxaana lagu sii xoojiyay, masiibada
Wada jir weligood? Wax ka qabashada wadajirka ah magaalada Leipzig, Jarmalka
Anaga oo ah aqoonyahan ku takhasusay dimuqraadiyada dhaqdhaqaaqa bulshada iyo aqoonyahan u dhaqdhaqaaqa arrimaha ka shaqeeya xiriirka xaafadaha, waxaan xiiseyneynaa awooda siyaasadeed iyo isbedel ee wadajirka ee ficilka inta lagu jiro dhibaatadan Sidaa awgeed, waxaan falanqeynaa dadaallada kala duwan ee iskaashiga inta lagu guda jiro aafada ka jirta magaaladeena
Abaabulka (Im) ee Gargaarka Labada Dhinac Sandy, Liberalism -ka Jinsiyadda, Kaabayaasha Muqaawamada
Maqaalkani wuxuu bixiyaa falanqayn ku saabsan Occupy Sandy-oo ah urur u ololeeya fadhigiisu yahay New York oo la aasaasay isagoo ka jawaabaya superstorm Sandy bishii Oktoobar 2012-si loo muujiyo waxa laga yaabo
wax ka baro dhaqdhaqaaqyada deg -degga ah (im). Gaar ahaan, waxay soo jeedinaysaa Occupy Sandy qaababka dhaqdhaqaaqa iyo meelaynta tirada badan, waxay naga caawin kartaa inaan helno waddo ku wajahan kaabayaasha kacdoonka oo ka baxsan xorriyadda jinsiyadda, mid lagu saleeyay oo laga soo saaray dib -u -habayn xag -jir ah oo magaalada iyo muwaadinnimada magaalada lafteeda.
"Waxaan ku jirnaa karantiil laakiin daryeeliddu ma joogsato": Gargaarka is-kaashatada ee ah Xannibaadda Xagjirnimada ee Brazil
Aqoonyahanada haweenka waxay muddo dheer ku doodayeen in "dhibaatada daryeelka" ay tahay astaamaha bulshooyinka hanti-wadaaga - hanti-goosadku wuxuu u janjeeraa inuu khatar galiyo oo uu baabi'iyo geedi socodka iyo xaaladaha taranka bulshada ee ay ku tiirsan tahay.